PaCashCounterMachines.com, takazvipira kuchengetedza kuvanzika kwako.
Isu tinoshandisa ruzivo rwatinounganidza kubatsira mukugadzirisa maodha. Ndokumbira uverenge kuti uwane rumwe ruzivo nezve yedu zvakavanzika mutemo.
CashCounterMachines.com inounganidza kubva kwauri ruzivo rwunodiwa, senge zita, email kero uye ruzivo rwekadhi rechikwereti, kugadzirisa odha yako.
Isu Hatigovere Ruzivo Rwako Pachako:
CashCounterMachines.com haitengesi, kutengesa, kana kurenda ruzivo rwako kune vamwe. Ruzivo urwu nderwemarekodhi edu akavanzika chete. Isu tinoganhurira kupinda kwemirairo yako kune avo vashandi vanofanirwa kuziva iyo ruzivo kuti vakupe zvigadzirwa kana masevhisi kwauri. Ruzivo rwemunhu haruwanikwe kune chero wechitatu bato kuburikidza newebhusaiti yedu kana nedzimwe nzira.
Spam Email uye Kushandisa Email Kero:
Isu tinoita zvese kuedza kudzikisa huwandu hwetsamba dzeemail dzaunogamuchira kubva kwatiri. Isu hatigovane kana kutengesa email kero yako kune chero vechitatu mapato.
Isu tinoshandisa yazvino 128-bit SSL (Yakachengeteka Socket Layering) encryption tekinoroji mune yedu yepamhepo yekutenga ngoro system. Izvi zvinoitirwa kukudzivirira kubva pakushandisa zvisiri pamutemo ruzivo rwauri kutumira kune yedu server. Kuti uve nechokwadi chekuti une azvino kuchengetedza maficha pabrowser yako dhawunirodha uye isa yazvino vhezheni yebrowser yako yaunofarira, Microsoft Internet Explorer, Safari, Google Chrome, Netscape Communicator kana Mozilla Firefox.
CashCounterMachines.com inoshandisa makuki kuti uwedzere kutenga kwako uye kubhurawuza ruzivo uye kuchengeta ruzivo rweodha yako. Makuki atinoshandisa HAZVICHETE chero ruzivo rwemunhu senge e-mail yako, kero yemugwagwa, nhamba dzenhare kana nhamba yekadhi rechikwereti.
Kuti uve nechokwadi chekuchengetedza uye kuvanzika kwako mungoro yekutengera, tinoshandisa Secure Socket Layer (SSL) tekinoroji: chiyero cheindasitiri chekufambisa ruzivo rwakadzama paInternet. Yedu yakachengeteka server software encrypts (inokwenya) yese yeruzivo rwako rwemunhu kusanganisira nhamba yekadhi rechikwereti, zita nekero, kuitira kuti isaverengeke sezvo ruzivo rwunofamba paInternet.
Iyo encryption process inotora mavara aunopinza uye oashandura kuita mabits ekodhi anofambiswa zvakachengeteka paInternet uye anogona chete kuunganidzwa uye kuverengerwa nemuridzi wesaiti yakachengetedzwa.
Kuti uone kuti yako yekubatanidza ngoro yekutengera yakachengeteka, tsvaga yakakiyiwa padlock icon kana yakasimba kiyi icon pazasi pebrowser hwindo rako kana uri muchikamu chengoro yekutenga pawebhusaiti. Mavara ekuti "https" (pane kuti "http") ari pahwindo rekero yeURL kumusoro kwebrowser yako anoratidzawo kuti uri kushandisa browser yakachengeteka.